के तपाइको घर, फ्ल्याट, अफिस सार्नुपर्ने छ ? क्विक मुभर्सलाई सम्झीए पुग्छ। onlinedarpan.com
Tuesday 22nd of September 2020 / 08:21:38 PM
के तपाइको घर, फ्ल्याट, अफिस सार्नुपर्ने छ ? क्विक मुभर्सलाई सम्झीए पुग्छ।
यतिबेला विश्व कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न माहामारीको सामना गरिरहेको छ। धेरै देश लकडाउनमा छन्। नेपालमा पनि लकडाउन सुरू भएपछि जनजीवन अत्यन्तै कस्ठकर बन्दै गईरहेको छ । धेरै उद्योग, कलकारखानाहरु तथा अफिसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय कार्यलायहरु तथा व्यापारिक प्रतिस्ठानहरु महँगो भाडा तिर्न नसकेर सार्नु पर्ने अवस्थामा छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका व्यवसायिक तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु तथा पसल हत्तपत्त खुल्दैनन्। खुले पनि ब्यापार हुदैन । अर्काको घरमा भाडा तिरेर व्यवसाय संचालन गर्नेहरुलाई भाडा तिर्नै मुस्किल छ। महँगो भाडा तिरेर फ्ल्याटमा आरादयी संग बसेकाहरु पनि एतिबेला असहजताका कारण आ आफ्नो गृह जिल्ला फर्केका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तपाइलाई तपाइको घर, फ्ल्याट, अफिस सार्नुपर्ने छ र सार्नका लागि समस्या भैरहेको छ। येदि त्यसो हो भने क्विक मुभर्सलाई सम्झनुहोस।
क्विक मुभर्स एण्ड प्याकर्स घर, फ्ल्याट, अफिस सार्न अनलाइन सेवा हो। तपाई वेबसाइट, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफू बसेकै ठाउबाट क्विक मुभर्सको सेवा लिन सक्नु हुन्छ ।
क्विक मुभर्स नेपाल सरकार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनि रजिस्टार्ड कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भ्याटमा समेत दर्ता भएको कम्पनि हो।
कम्पनिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा घरायसी तथा कार्यालयीय सामानहरुको प्याकिङ्ग तथा ओसार पसार गर्ने गर्दछ । साथै कम्पनिले नेपाल अधिराज्यभर तथा भारतमा समेत सेवा पुर्यााउन थालेको छ। कम्पनिले यो सेवा उपलब्ध गराउन थालेको दुइ वर्ष भयो।
कम्पनीले टेलिफोन सामाजिक सञ्जाल र व्यवस्थापन समितिको सम्पर्कमा आएका सेवाग्राहीलाई १५ जनाको दक्ष टोलीले गुणस्तरीय एबम भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
कम्पनीको सेवाबारे संचालक प्रमोद अधिकारि बताउँछन्, 'काठमान्डौबाट पुर्वमा काकडभित्ता तथा पश्चिममा नेपालगंज तथा महेन्द्रनगर सम्म घरायसी तथा कार्यालयीय सामानहरुको प्याकिङ्ग गरेर पुर्यामयौं, त्यो हाम्रो सफलता हो।'
यसले सामान ओसारपसार मात्रै गर्दैन, निर्धारित समयमै सुरक्षित तवरले ओसारपसार समेत गर्दछ ।
सुरुमा आफ्नो सवारीबाट सामान ओसार पसार गराइदिने गरेका संचालक प्रमोदले यसलाई संस्थागत रूप दिन अन्य आफूजस्त पाँच सवारी धनि मिलेर क्विक मुभर्सको स्थापना गरे।
अहिले चौतर्फी लकडाउनमा घर अफिस सार्न गाडि तथा दक्ष कामदारको अभाव झेलिरहेका उपभोक्तालाई क्किक मुभर्सले सेवा दिने बताएको छ।
क्किक मुभर्ससँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र वेबसाइटमार्फत् सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
भारत लैजाँदै गरेको ४० क्विन्टल मटर प्रहरीको नियन्त्रणमा